I-Peg-200: Ingasetyenziselwa njengendawo yokuhlanganisa izinto eziphilayo kunye nomphathi wobushushu oneemfuno eziphezulu. Ingasetyenziswa njenge-humectant, isinyibilikisi esongeza ityuwa engaqhelekanga kunye nolawulo lwe-viscosity kumzi mveliso weekhemikhali wemihla ngemihla. Isetyenziswa njengethambisi kunye nearhente ye-antistatic kwishishini lempahla eyolukiweyo; Isetyenziswa njenge-arhente yokumanzisa imveliso kwishishini lephepha kunye nakwimboni yezitshabalalisi.
I-Peg-400: I-PEG-400 ilungele ukwenza iifomsile ezithambileyo. Kuba i-PEG400 lulwelo, inokudityaniswa okubanzi kwezinyibilikisi ezahlukeneyo, isisinyibilikisi elungileyo kunye nesinyibilikisi, isetyenziswa ngokubanzi kumalungiselelo alulwelo, afana nolwelo lomlomo, amathontsi wamehlo, njl.njl. yinto ekhethiweyo. Oku kubangelwa kukuba i-PEG izinzile kwaye akukho lula ukonakala, xa inaliti ene-PEG ishushu ukuya kwi-150 degrees Celsius, ikhuselekile kwaye izinzile. Ukongeza, inokuxutywa nobunzima obuphezulu beemolekyuli (i-PEG) kunye nomxube wayo unokunyibilika okuhle kunye nokuhambelana neziyobisi.
I-Peg-400, i-600, i-800: isetyenziswa njengemigca ephantsi yamayeza kunye nezithambiso, izinto zokuthambisa kunye neearhente zokumanzisa iirabha kunye namashishini elaphu. I-Peg-600 eyongezwe kwi-electrolyte kwimizi-mveliso yesinyithi inokuphucula ukusebenza kokugaya kunye nokwenza ngcono ukubengezela komphezulu wentsimbi.
I-Peg-1450, 3350: I-PEG-1450, 3350 ilungele i-oint, i-suppositories, i-creams. Ngenxa yokunyibilika kwamanzi okuphezulu kunye nendawo ebanzi yokunyibilika, i-PEG1450 kunye ne-3350 inokusetyenziswa yodwa okanye ixutywe ukuvelisa indawo yokunyibilika enexesha elide lokugcina kwaye ngokuhambelana neemfuno zamayeza kunye neziphumo zomzimba. Ukwenza ii-suppositories ezisekwe kwi-PEG zingacaphukisi kunamaqhekeza eoyile aqhelekileyo.
I-Peg-1000, i-PEG-1500: isetyenziswa njenge-substrate okanye i-lubricant kunye ne-softener kumzi mveliso wamayeza, wempahla kunye nowezithambiso; Isetyenziswa njenge dispersant kushishino ukutyabeka ukuphucula ukusasazeka kwamanzi kunye nokuguquguquka kwentlaka, idosi yi 10-30; I-inki ingabuphucula ubuchule bokunyibilikisa idayi, ukunciphisa ukungahambelani kwayo, kwiphepha le-wax kunye ne-inki yepad ilunge ngakumbi, kodwa nakwinki yebhola yokulungisa i-viscosity ye-ink; Kwimveliso yerabha njengesixhobo esasazekayo, khuthaza isenzo se-vulcanization, njengekhabhoni emnyama yokugcwalisa isasazi.
I-Peg-2000, i-3000: Isetyenziswa njenge-arhente yokuphosa isinyithi, ukuzoba isinyithi, ukunyathela okanye ukwenza igrisi kunye nokusika ulwelo, ukugaya ukupholisa ukuthambisa i-lubrication, iarhente ye-welding, njl .; Isetyenziswe kwishishini lephepha njengesithambisi, njl., Kwaye nanjenge-adhesive eshushu-ukunyibilika ukwandisa umthamo wokukhawulezisa ukukhawulezisa.
I-Peg-4000, i-6000, i-8000: I-PEG-4000, 6000, 8000 isetyenziselwa iipilisi, iifomsile, iidyasi zefilimu, iipilisi ezilahlwayo, ii-suppositories, njl.
I-Peg-4000 kunye ne-6000 zisetyenziswa njengezinto ezincedisayo kushishino lwamayeza njengee-suppositories kunye ne-oint. Isetyenziswa njenge-arhente yokugqiba kushishino lwephepha ukwandisa i-gloss kunye nokuguda kwephepha; Kwimveliso yerabha njengesongezo, yandisa ukuthambisa kunye neplastikhi yeemveliso zerabha, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwinkqubo yokulungisa, ukwandisa ubomi benkonzo yeemveliso zerabha.
Isetyenziswe njenge-matrix kwishishini lokuxuba kunye nezokuthambisa ukulawula i-viscosity kunye nendawo yokunyibilika; Isetyenziswa njengesithambisi nesisipholisi kwirabha nakwicandelo lokulungisa isinyithi, isasazi kunye ne-emulsifier kwishishini lokubulala izitshabalalisi kunye nombala. Isetyenziswa njengearhente ye-antistatic, i-lubricant njalo njalo kwishishini lempahla eyolukiweyo.
Ubunzima beMolekyuli ephezulu ye-PEG (PEG4000, PEG6000, PEG8000) iluncedo kakhulu njengesibophelelo semveliso yethebhulethi ngenxa yeplastiki yePEG ngexesha lokulungiselela kunye nokukwazi kwayo ukuphucula ukukhutshwa kwethebhulethi. I-PEG yenza umphezulu wecwecwe ucwebezele kwaye ugude, kodwa ungonakali lula. Ukongeza, isixa esincinci sobunzima obuphezulu beemolekyuli i-PEG (PEG4000, PEG6000, PEG8000) inokuthintela ukunamathela phakathi kwamacwecwe e-icing kunye neebhotile zamayeza.